Cristiano Ronaldo Iyo Saaxiibaddii Georgina Rodriguez Oo Go’aan Ku Gaadhay Inay Is-guursadaan | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Cristiano Ronaldo Iyo Saaxiibaddii Georgina Rodriguez Oo Go’aan Ku Gaadhay Inay Is-guursadaan
(17-11-2018) Cristiano Ronaldo ayaa ugu dambayn guursan doona saaxiibaddii Georgina Rodriguez oo hore ugu dhashay carruur, waxaana soo afjarmi doonta muddo laba sannadood oo ay ahaayeen saaxiibbo aan marna kala hadhin.
Wargeyska kasoo baxa dalka Portugal ee Correio da Manha in Cristiano Ronaldo uu jawaab wanaagsan uu ka helay Georgina mar isaga oo gacanta haysta uu weydiiyey inay u ogolaato inay xidhiidhkooda saaxiibtinimo u beddelaan guur.
Ronaldo iyo Georgina oo uu saaxiib lahaa labadii sannadood ee u dambeeyey ayaa waqti fasax ah ku qaadanaya dalka Ingiriiska, waxaanay toddobaadkan ka qayb-galeen ciyaartii finalka Tennis-ka ee ka dhacday Royal Opera House.
Wargeyska Correio da Manha waxa uu qoraalkiisa ku sheegay in Cristiano Ronaldo oo uu wehelinayo wiilka weyn ee ay walaalaha yihiin ee Zela ay kulan qado ah yeesheen, waxaana sidoo kale fadhiyey madasha curadka Ronaldo ee Cristiano Junior.
“Cristiano wuxuu weydiistay Gio inuu guursado, arooskuna si degdeg ah ayuu u qabsoomi doonaa, inkasta oo ay dadka u dhow uun ogaaan doonaan faahfaahinta” Sidaas ayaa uu wargeysku kasoo xigtay ilo wareedyo ka ag-dhow Cristiano Ronaldo.